Amabinzana amancumo ▷ ➡️ Discover Online ▷ ➡️
Ukuncuma kuvula iingcango, kukunceda ukuba uphucule imeko yakho, ukujongana neengxaki ngesimo sengqondo sokuphumelela, ukonwaba.
1 Iziqendu malunga nokubetha
2 Amabinzana okuncuma nokuba ukhathazekile
3 Amabinzana amfutshane abonisa ukuncuma nothando
4 Amabinzana amavidiyo malunga nokumomotheka
Phambi kokuba ufinge iintsimbi, jonga ukuba akukho luncumo lufumanekayo. -UJim Beggs.
Uncumo lwakho lusenjalo ilanga ukugqobhoza phakathi kwamafu. -UDale Carnegie
Yenza uncumo lwakho lube yisambrela kwaye luye lunethe. - Iincopho zamawele
Ngaba uyazi ukuba yintoni eyosulela ngokwenene? Uncumo olukhulu. - Ukukhuhla
Ngamehlo akho endiwajongileyo, yimilebe yakho endifuna ukuyibona incume. -Violeta Parra
Xa umntwana eqala ukuncuma, ngemfoloko encinci yobukrakra nobumnandi, imiphetho yokuncuma kwakhe iyahamba ngaphandle kokuhlekisa kwisiphithiphithi solwandle. -Osip Mandelshtam
Ukwenza uncumo lomntu kuthetha lukhulu kum kunayo nayiphi na enye into. - Umichael Jackson
Andisokuze ndizivumele ndibaluleke kakhulu, ndilumke, ndigcinwe, kwaye ndinamandla kangangokuba andinako ukuncuma kwabanye ndizihlekise. -U-Og Mandino
Xa encumile, walibala ngayo yonke into. - Palms kwikhephu
Xa le ndoda yancuma, el mundo Ndiyamthanda. Xa ehleka, wayemoyika. -Rabindranath Tagore
Benze bazibuze ukuba kutheni uncumile. -Elizabethtown
Ukuba inye into endiyithandayo, iyaphila. Jonga umzimba wam esitratweni, ndithethe nawe njengeqabane, iivenkile zevenkile kwaye, ngaphezulu kwako konke, uncume ukude emithini. -Blas de Otero
Ndingathanda ukuba noncumo oluninzi kunye noluhlu olukhulu lweendlela zokuthetha. -Concha Mendez
Amabinzana okuncuma nokuba ukhathazekile
Uye wancwina emva koko wancuma oloncumo lunye, nokuba angakubona kangaphi, uhlala eyiba intliziyo yakhe. Qho xa encumile, yayilixesha lokuqala kwakhona. -Neil Gaiman
Kwakuncumo olunokwenza indoda icinge ukuba ubomi bumnandi. -UJohn Verdon
Olona ncumo lunyanisekileyo lolusasazeka ebusweni bethu xa kungekho mntu ujongayo. - UMinhal Mehdi
Ndifuna ukosula iinyembezi zabo bonke abo bathembela ngethemba kwaye bazisusa. Ndifuna ukuba bahlale ngoncumo ebusweni babo. -I-Quartet yoMlingo
Ukuba krwada kukrwada. Akuxabisi nto ukongeza uncumo. -UJean de La Bruyère
Ukuhleka lulwimi lomphefumlo. -UPablo Neruda
Kungenxa yokuba ndindedwa, ndibona uncumo lwakhe amawaka ngaphambi kokuba lufike ebusweni bakhe. -UDavid Mitchell
Indoda engakwaziyo ukuhleka ayilungelanga kuphela ukungcatshwa, ubuqili kunye nobuqhetseba, kodwa ubomi bayo bonke sele ingcatshi kunye neqhinga. -Thomas Carlyle
Ulilanga lam ebusuku, inyanga yam yosuku, olona ncumo lwam. -Federico Moccia
Uncumo luphakamile njenge feat. -UManuel Del Cabral
Ndilinde uncumo lwakho kwaye ndilinde ivumba lakho elingaphezulu kwako konke, ixesha kunye nomgama. -UJose Angel Buesa
Andikwazi ukuzibamba kodwa ndithethelela ukukhuthaza abantwana ukuba bancume endaweni yokulila. Andifuni ukuhlawula ukuze ndibone iinyembezi ngaphandle kwezo zivela kwindawo yokubonela. - URobert Louis Stevenson
Sukulila kuba kugqityiwe. Ncuma kuba yenzekile. -Gqirha Seuss.
Amabinzana amfutshane abonisa ukuncuma nothando
Uncumo lwakhe lunokumisa intliziyo yomntu. - Igama lomoya
UThixo wadala intlango ukuze umntu ancume xa ebona imithi yesundu. -U-Paul Coelho
Ukufa ncuma sonke, masibuye sincume. - iGladiator
Olo luncumo lundisindisile ekulileni nasentlungwini. -USalvatore Quasimodo
Indoda esihlekisayo ineevoti ezininzi zenjongo yakhe kunendoda efuna ukuba sicinge. -UMalcolm de Chazall
Xa uzalwa, ekuphela kwento onokuyenza kukukhala. Kancinci kancinci ufunda ukuncuma. Ukuyekelela kukaHalldór
Ndinxiba uncumo ondinike lona namhlanje. -U-Edith Castro
Wancuma kum njengendoda engenakho, ngokungathi abafazi bayazi yonke into malunga nabanye kwasephakadeni. -UMarcela Serrano
Uncumo yilaphu elihlambulula iimbumba zentliziyo. - Mort Walker
Uncumo lwamkelekile kwilizwe lonke. - UMax Eastman
Sukulila kuba kugqityiwe, ncuma ngoba yenzekile. -Gabriel Garcia Marquez
Ukujonga, umhlaba-ngoncumo, isibhakabhaka-ngokumanga ... andazi ukuba ndingakunika ntoni na ngokumanga. -Gustavo Adolfo Becquer
Imilebe yakhe ibingashukumi, kodwa xa ndimjongile kubonakala ukuba bayancuma bengakhange benze nencinci intshukumo. -U-Anne Rice
Balekani engcwabeni kunye nobuso obundilisekileyo obungaze bube luncumo. Baleka kwimimoya echaphazelekayo, abakhubekisayo yiyo yonke into. -URichard Leon
Amabinzana amavidiyo malunga nokumomotheka